सिंगापुरसँग मलेसिया पराजित, नेपाललाई फाइदा ! - Everest Dainik - News from Nepal
सिंगापुरसँग मलेसिया पराजित, नेपाललाई फाइदा !
काठमाडौं, साउन १० । सिंगापुरमा जारी आईसीसी टि–२० विश्वकप एसिया क्षेत्र छनोट अन्तर्गत मलेसियाविरुद्ध सिंगापुर ८ विकेटले विजयी भएको छ । मलेसियाले दिएको ९३ रनको सामान्य लक्ष्य सिंगापुरले १३.२ ओभरमा २ विकेट गुमाउर पूरा गर्यो ।
उसका लागि सुरेन्द्रन चन्द्रमोहनले नटआउट ५०, मनप्रीत सिंहले २६ र टिम डेभिडले १४ रन बनाए । बलिङमा मलेसियाका निभ्ली ल्याङ्गेले एक विकेट लिए । यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको मलेसियाले १८.४ ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाएर ९२ रन मात्र बनायो ।
याे पनि पढ्नुस भोलिको खेलबारे के भन्छन् कप्तान खड्का? (भिडियो)
उसका लागि मुहदत सहादतले सर्बाधिक २२, विरन्दीप सिंहले १७, शाफिक सरिफ, अमिनुद्दिन रेम्लीले १२–१२ रन बनाउनुबाहेक अन्यले दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन् । बलिङमा सिंगापुरका अम्जाद महाबब, अनान्थ कृष्णले ३–३सेलाडोरी विजयकुमारले २, जनक प्रकाश र विनोध भास्करले एकएक विकेट लिए ।
मलेसियाको हारले नेपाललाई फाइदा पुगेको छ । नेपालले अब सिंगापुर र कुवेतलाई हराए सहजै शीर्ष स्थानमा पुग्ने छ । यी दुई खेल मध्य एक हारे वा वर्षाको कारण रद्द भए नेपालको संभावना अंक गणितीय झिनोमात्रै बाँकी रहने देखिन्छ । नेपाल २ खेलमा समान १ खेलमा जीत हारका साथ तेस्रो स्थानमा छ । नेपालले शनिवार कुवेत र आईतबार सिंगापुरसँग खेल्ने छ ।
ट्याग्स: नेपाल भर्सेस सिंगापुर, सिंगापुर भर्सेस मलेसिया